1 Na kusuwwyɛ no ronnko hɔ mma nyia ɔwɔ ahoguan mu no. Mber a odzi kan no, oemmbu aZebulun asaase, na Naphtali asaase bi, na ekyirii wɔdze ɔhaw dzendzen ba hɔn do wɔ, Po Memen kwan do, Jordan egya, amanaman Galilee mu.
2 Ɔman a wɔnantseew asum mu no woehu kan kɛse; hɔn a wɔtsenaa owu sunsum asaase do no, kan ahyerɛn hɔn do.
3 Ɔwo ama ɔman no adɔr, ɔwo ama hɔn aenyigye adɔɔ sõ—hɔn enyigye w’enyim dɛ otwaber mu enyigye, dɛ mbrɛ adasa dzi ehurusi ber a wɔrekyɛ asadze.
4 Na n’adzesoa kɔndua no na n’abatsir poma no, na ne hyɛdofo abaa no, ebubu mu dɛ Media da no.
5 Na ɔkofo n’akodze a ɔwɔ gyigyeegye no mu nyina, na ntar a wɔdze efuntamfuntam bɔgya mu, ɔbɛyɛ adze a wɔhyew, ɔnye ogya nyena.
6 Na wɔawo aɔba ama hɛn, na wɔama hɛn ɔbabanyin, na bahendzi no bɛda ne batsir do; na wɔbɛfrɛ ne dzin, Nwanwanyi, Ɔpamfo, cOnyame Katakyi, dEgya a ɔwɔ hɔ Daapem, eAsomdwee Hen.
7 Na an’ahendzi na n’asomdwee ne trɛ no bnnyi ewiei, wɔ David ahengua do na n’ahendzi do, dɛ obetsim no, na ɔdze atsɛmbu na tsenenee awowaw no ofitsi ndɛ, dze kesi afebɔɔ mpo. Dɔm Ewuradze no mbɔdzembɔ bɛyɛ yi.
8 Ewuradze dze asɛm bi kraa Jacob, na oebodwir aIsrael do.
9 Na ɔman no nyinara bohu, Ephraim na Samariafo a wɔkã wɔ nkontompɔ na hɔn akokodur mu dɛ,
10 Ntaayaa egu famu, na yɛdze abo a wɔasen besi; woetwitwa sycamore-ndua, na yɛdze cedar bɛhyɛ ananmu.
11 Dɛm ntsi Ewuradze bɛma aRezin etsiafo do ahyɛ no do, na oekenyan n’atamfo abɔ mu.
12 Syriafo dzi enyim na Philistiafo dzi ekyir; na wɔdze anomu petoo aamen Israel. Iyi nyina mu no bn’ebufuw nndanee, mbom ɔda ho ara atsen ne nsa mu.
13 Naaso ɔman no annsanee mmbaa nyia ɔbɔɔ hɔn no nkyɛn, eso wɔnnhwehwɛɛ dɔm Ewuradze n’ekyir kwan.
14 Dɛm ntsi Ewuradze botwa Israel tsir nye dua, abaw nye mbɛw akyen da kor.
15 Ɔtsetsenyi ɔnye onyimnyamfo, ɔno nye tsir no, na nkɔnhyɛnyi atorkyerɛnyi no, ɔno nye dua no.
16 Na hɔn a wɔkyerɛ ɔman yi kwan no dze hɔn fom; na hɔn a wɔkyerɛ hɔn kwan, wɔasɛɛ hɔn.
17 Dɛm ntsi Ewuradze rinnya hɔn mberantsɛ ho enyigye, eso orunnhu hɔn ngyanka nye hɔn ekunafo ambɔbɔr; na obiara ayɛ onyisomkyerɛnyi na omumuyɛnyi, na ano biara kã bnkwaseasɛm. Iyi nyina mu no n’ebufuw nndanee, mbom ɔda ho ara atsen ne cnsa mu.
18 Na emumuyɛ hyew dɛ ogya; ɔmen nkɔkrɔw ɔnye nsoɛ, ampaara ɔsɔ wɔ kwaa mu adɔtɔ mu, na opun wusiw kumbɔɔ fow kɔ sor.
19 Na ɔnam dɔm Ewuradze n’ebufuw do na asaase no ahyew tumm na ɔman no so ayɛ dɛ ogya nyena; aobiara nnkam no nua do.
20 Na obi bohwim enyimfa edzi naaso ɔkɔm adze no; na aobedzidzi wɔ bankum na wɔremmee wɔbɔwe hɔnara hɔn nsa ho nam—
21 aManasseh, bEphraim; na Ephraim, Manasseh; na hɔn beenu asoɛr etsia cJudah. Iyi nyina mu no n’ebufuw nndanee, mbom ɔda ho ara atsen ne nsa mu.
“Kusukusuyɛ” nye “sum” yɛ gyedzi ho asehwe na ndummum “kan kɛse” no yɛ Christ.
DƐ Nkɔmhyɛ nsɛm ɔtoa (nyiyimu 8–21) do yɛɛ kɔkɔbɔ maa ebusua du wɔwɔ etsifi no, wɔfrɛ hɔn Israel.
2 Ahem. 16:5–9.
2 Ahem. 17:6, 18.